ANTENIMIERANDOHOLONA – FES: Fanatsarana sy fampitomboana ny traik’efa eo amin’ny mpiasan’ny Parlemanta. – Sénat de Madagascar
ANTENIMIERANDOHOLONA – FES: Fanatsarana sy fampitomboana ny traik’efa eo amin’ny mpiasan’ny Parlemanta.
February 7, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Ho tohin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Antenimierandoholona sy ny mpiara-miombon’antoka FES na ny « Fondation Friedrich Ebert Stiftung » dia nisy ny dinik’asa notanterahina teny amin’ny Antenimierandoholona Ampefiloha, nahitana ny solontenan’ny FES Andriamatoa John MIANDRARIVO, sy ireo avy amin’ny Sampandraharaha mpiara-miasa akaiky mahakasika ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaràm-pahefana teto anivon’ity Andrimpanjakana faha-roa ity. Nitarika izany ny Tale miandraikitra ny Fanapariaham-pahefana Andriamatoa RANDRIANAMBININA Christiansenn Robert, sy ny Talen’ny fampandehan-draharaha Ramatoa RANDRIANASOLO Niaritiana ary ireo solo-tena avy amin’ny Kestora Volohan’ny Antenimierandoholona notarihin’ny mpanolotsaina Andriamatoa RAMANANDRASON Henri ny Alarobia 06 Febroary 2019.
Tomban’ezaka sy fanatsarana ny sehatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny akapobeny eo amin’ny roa tonta mba hisian’ny firoboroboana sy fampitomboana ny traikefa eo amin’ny mpiasan’ny Parlemanta dia ny Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena manomboka izao no tanjona ka miainga amin’ny fanavaozana sy ny fomba fiasa mba hitera-bokatsoa amin’ny vahoaka eny anivon’ireny Vondrombahoakam-paritra manerana ny Nosy. Hisy araka izany ny lamina vaovao ho raisin’ny FES ka hatomboka ny 23 Febroary 2019 hoavy izao ny fanofanana ireo mpiasa ireo anivon’ny Parlemanta ireo.
Ety am-boalohany dia ny mpiasa eo anivon’ny fandraharahana ny fanapariaham-pahefana na « Direction de la décentralisation » ato amin’ny Antenimierandoholona no hahazo izany fiofanana manokana izany, izay hiompana indrindra amin’ny loha-hevi tra hoe : « Technique d’analyse », sy « Technique d’enquête » ary ny « Technique d’archivage » no votoatin’ny fiofanana hatao mba hahafahana manangona ireo tahirin-kevitra na « documentation ».
Hisy araka izany ny fitrandraham-baovao miainga avy any anivon’ireo Kaominina miisa 1695 eto Madagasikara izay ny Antenimierandoholona no misolo tena mivantana azy ety anivon’ny fitondrana foibe araka ny Andininy faha 81 voafaritry ny Lalàm-panorenana.
Hetsika tafiditra indrindra amin’ny fampivoarana ny fomba fiasa no tanjon’ny tetik’asa fampiofanana na « Projet de Coopération Parlementaire ».
Izany no hatao dia mba ahafahana mandrindra hoamin’ny tsaratsara koakoa ny fomba fiasa eo amin’ny Parlemanta sy ny FES andaniny, ankilany kosa dia ny Parlemanta sy ny fitondrana mpanatanteraka dia ny Minisiteran’ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana.